Global Voices teny Malagasy » Jackie Chan: “Lasa Tanànan’ny Fanoherana i Hong Kong” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Desambra 2012 1:57 GMT 1	 · Mpanoratra Abby Liu Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsinanana, Hong Kong (Shina), Shina, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
Niteraka hatezerana tao Hong Kong ilay mpilalao sarimihetsika sy kintan'ny haiady Kung Fu , Jackie Chan, taorian'ny nivoahan'ny tafatafany tamin'ny Southern Weekly  tamin'ny 11 Des 2012. nandritra ilay tafatafa, ity kintan'ny sarimihetsika teraka tao Hong Kong ity dia niteny hoe :
Kanefa, tsy vao izao no voalohany nanaovan'i Chan fanambaràna tahaka izany. Tamin'ny 2009, nanao fanamarihana tao amin'ny Boao Forum  izy: “Tena tsy haiko na tsara na tsia ny manana fahalalahana. Raha be loatra ny fahalalahana, mety ho ambony ambany tanteraka. Mety hiafara toy ny ao Taiwan. Mila araha-maso ny vahoaka Shinoa, raha tsy izany dia izay tiany hatao no ataon-dry zareo.”
Taorian ‘ny fanehoankevitra nahabe resaka avy amin'i Chan, nanakiana  azy ireo mpisera anaty aterineto ao Hong Kong, ny sasany aza nanainga mihitsy ny governemantan'i Hong Kong hametra ny fahalalahan'i Chan maneho hevitra imasom-bahoaka.
Leung Man-tao, mpanao kiana avy ao Hong Kong niteny tamin'ny South China Morning Post :
Ao amin'ny Weibo , ny Twitter ao China, ny ankamaroan'ireo mpisera anaty aterineto dia mihevitra an'i Chan ho “nanoroka vodin'omby”, mivazivazy hoe manana vintana ny ho tafiditra ao amin'ny Antoko Kaomionista ao Shina izy. Nasehon'izy ireo ny faniriany fahalalahana sy demaokrasia ho an'i Hong Kong izay heverin'i Chan izy samirery ho toy ny fanomezana:
黎子Cindy ：Nandritra ny fitsidihako tao HK, dia teny rehetra teny ny dokambarotry ny Falun Gong; ny olona sasany mizara trakitra miampanga mpitarika iray teo aloha momba ireo fanenjehany noforomporonina, tsy nisy olona nanakana azy ireny. Na dia tsy nisy nanohitra aza, dia tokony mba navoaka ny sorabaventy ary notakiana ry zareo handao an'i Hong Kong. Raha tany amin'ny tanibe [Shina] ry zareo, mety efa potika. Mbola lavitra be antsika foana ny zon'olombelona sy ny fahalalahana.
Keith何 ：Nahoana isika no tsy ho afaka hanakiana ireo mpitondra antsika tahaka ny ataon'ireo any amin'ny fiarahamonina demaokratika? Rehefa tsy manao asa tsara ry zareo, dia hanakiana azy isika. Zon'olombelona sy fahalalahana io, mety tsy hahatakatra izany ny olona sasany tahaka an'i Jackie Chan! Nambarany fa na iza na iza afaka manao izany dia afaka mitantana fa tsy hibedibedy fotsiny ny governemanta. Tsy fantatr'i Jackie Chan ve ny fomba nifidianana ireo mpitondra antsika? Tsy mahavita misafidy ny olona, raha nanao izany ry zareo, tsy ho amin'izao toerana misy azy ankehitriny izao i Shina!
流氓也有爱情梦 ：Tokony hianatra avy amin'i Hong Kong ireo mponina any amin'ny tanibe . Eto ny olona tsy misy sahy mibedibedy sy manao hetsi-panoherana.
大彬仔失业状态 :Manana fahalalahana maneho hevitra i HongKong, ianao [Chan] dia misitraka io zo io na dia manakiana azy aza, mitovy aminà bandy iray be sakafo/manana ny ampy ianao, izay tsy mahalala ny atao hoe hanoanan'ny hafa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/12/15/43139/
 niteny hoe : http://ndnews.oeeee.com/html/201212/13/9102.html?bsh_bid=169064803